के छ अष्ट्रेलियाको नयाँ रिजनल भिषामा? कुन कुन काममा पाइन्छ पिआर? – NepalAustralianews.com
के छ अष्ट्रेलियाको नयाँ रिजनल भिषामा? कुन कुन काममा पाइन्छ पिआर?
November 23, 2019 November 23, 2019 अमेरिका तथा अस्ट्रेलिया
मिलन दाहाल नेपालीहरुका लागी निकै आकर्षक गन्तब्य मानिएको अष्ट्रेलियाले आफ्नि रिजनल भिषामा केही हेरफेर गरेको छ । नयाँ भिषामा गरिएको व्यवस्थाले बाख्रापालक, कलाकार, पुरातत्वविद्, होमियोप्याथ, नर्स तथा सिकर्मीहरु सहजै रिजनल भिषाको बाटोबाट अष्ट्रेलिया आउन सक्ने भएका छन ।
अष्ट्रेलियाको सरकारले दुर्गमको आर्थव्यवस्थालाई सुद्रिढ गर्ने योजनाअनुरुप आप्रवासीहरुलाई त्यतातिर आकर्षित गर्नेगरि योजनाहरु ल्याइरहेको छ । सरकारले दुइखाले नयाँ व्यस्था गरेको छ जसअनुरुप अष्ट्रेलियाको स्थाइ बसोवास प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागी तीन बर्ष दुर्गममा बस्नैपर्ने हुन्छ ।
व्यवस्था गरिएको नयाँ भिषाले सिड्नी, मेलवर्न, ब्रिसबेन लगायतका अष्ट्रेलियाको ठुला शहरमा आप्रवासीहरुको संख्या कम गर्न र दुर्गमका समुदायमा दक्ष कामदार पुर्याउने बताउछन अष्ट्रेलियाका आप्रवासी मन्त्री डेभिड कोलेमन । “हामी दक्ष कामदारको आवश्यकता रहेका दुर्गमका ठाऊँहरुमा दक्ष कामदारको संख्या बढाउन कोसिस गरिरहेका छौं । उनले भने ।
“दुर्गममा तीन बर्ष बसिसकेपछी उनीहरु त्यही ठाँउसँग विविध तरिकाले जोडिइसकेका हुन्छन जसले गर्दा उनीहरु सोही ठाँउमा लामो समय बस्नेछन् ।” उनले थपे ।
थप गरिएका दुइ भिषाहरुमध्येको skilled employer-sponsored regional visa प्राप्त गर्न सरकारले तोकेका मध्येको पेशामा दक्ष रहेको आप्रवासीलाई दुर्गमको रोजगारदाताले प्रायोजन गर्नुपर्छ अर्थात रोजगारी दिनुपर्छ । यस भिषामा रहेर दुर्गम क्षेत्रमा रहेको रोजगारदातासँग तीन बर्ष काम गरिसकेपछी कुनै पनि आप्रवासी अष्ट्रेलियाको स्थाइ बसोबास प्राप्त गर्न योग्य हुन्छ ।
यसैगरि अर्को skilled work regional (provisional) visa मा सरकारले तोकेका मध्येको पेशामा दक्ष रहेको आप्रवासीलाई सरकार वा योग्य आफन्तले बस्न र काम गर्न प्रायोजन गरको अवस्थामा पीआर पाउन सक्ने अर्को भिषाको समेत चाँडै व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
अष्ट्रेलियाको संघीय सरकारले दुर्गमका लागी प्रतिबर्ष २५ हजार भिषा छुट्याएको छ । सरकारको नयाँ नियमअनुसार सिड्नी, मेलवर्न र ब्रिसबेनबाहेका सबै स्थानहरु भिषा आवेदनका लागी दुर्गम मानिनेछन ।
नयाँ दक्ष पेशाको सुची देहायबमोजिमको छ;
Abbreviations: R – Regional
सिड्नीमा श्रीमतिको कुटाइबाट एक नेपालीको मृत्यु?